Iyo Yakakwana Kudzoka Yeiyo Bara-Yakaumbwa Mhuri, Super Yakavanzika Nzvimbo Kugadzira Izvo Zvimwe
musha / Interior design / Kudzoka Kwakakwana Kwemhuri Yakaumbwa-neBara, Super Yakavanzika Nzvimbo Kugadzira Imba "Inofadza"!
2021 / 06 / 19 kupatsanuraInterior design 6701 0
Kumba kunonakidza kupfuura kubuda!
Mhuri yevatatu kubva kuTaiwan Province, murume nemukadzi vakadzokera kumusha kwavo Kaohsiung nemwanasikana wavo mudiki kutanga hupenyu hutsva. Imba yavo nyowani yakagadzirirwa ne HAO dhizaini muTaiwan Province, uye ivo vagadziri vakaratidza "zvakavanzika hunhu hwemba" mune ravo basa. Iye murume muimbi azere nehunyanzvi hunhu, mukadzi muridzi wemafashoni, uye mwanasikana mutambi wechidiki. Hunhu hwakasarudzika hwevanhu hunoita kuti imba ino izere nekunakidzwa kunoshamisa.
Rudzi rwepakutanga imba imba huru yakati sandara muchimiro chebara, uye hapana mamwe masvingo ekuparadzanisa mukati mekunze kwemakoramu. Mugadziri akaparadzanisa kamuri kuita maviri maererano neruzhinji uye pasiri chikamu.
▲ Yero ndiyo yega nzvimbo, shava ndiyo yeruzhinji nzvimbo
Mugadziri akapatsanura nzvimbo yeruzhinji zvinoenderana nemuridzi wekuda kwenzvimbo dzeveruzhinji uye dzakavanzika, uye nzvimbo yeruzhinji yakanangana nepfungwa ye "hushamwari horo", ichipa nzvimbo yakavhurika yekutaurirana kwepamoyo pakati penhengo dzemhuri. Iyo yega nzvimbo yekugadzira iyo pfungwa ye "wega studio", ichipa yakavanzika nzvimbo yenhengo dzemhuri kuti dziitire basa radzo.
Iyo yeruzhinji nzvimbo ine yekutandarira, yekudyira nekicheni, uye imba yekutandarira inova imba yekudyidzana yehupenyu hwemhuri, yakatarisana newindo, ine panoramic maonero eguta reKaohsiung. Kana iyo yekuratidzira skrini yadzikiswa, ipapo inoshandurwa kuita diki yemitambo horo.
Iyo grille dhizaini pamusoro peiyo imba yekuchengetera haisi chete inopa yekufema nzvimbo yekuchengetera, asi zvakare inoburitsa mwenje semwenje wemwenje.
Iko kusanganiswa kwepanyama kwehuni uye rattan zvinhu zvinova toni yenzvimbo, ichipa iyo mhuri hupenyu hwakasununguka, shanda uye kutamba pamba, kumba kunogona kuve kwakasununguka kupfuura nyeredzi hotera, kunakidzwa kupfuura kubuda!
Kusiyana neyakajairwa imba yekudyira, dhizaini akashandisa chigaro chakarukwa nemaoko chakasanganiswa nebhuku rekuchengetera uye tafura yekudyira yakagadzirirwa kugadzira nzvimbo yekudyira. Mwanasikana anowanzoimba nekutamba pabhenji, uye dhizaini yekudyira yakawedzerwa uye madhirowa madiki anogona zvakare kushandiswa setafura yebasa renguva pfupi.
Iye murume dzimwe nguva anoita kuisa tsika pane iyo turf yebhokisi.
Kicheni inopindura tsika dzekubika dzemhuri dzemazuva ano nekuronga yakakura uye ine mhepo yekubikira nzvimbo yezvigadzirwa zvidiki, uye kupinda munzvimbo isinganyanyo shandiswa yakavhurika moto.
Mataya akaenzana-akaenzana ane hutsva uye anotaridzika, uye kumucheto kwakatenderedzwa kwechitsuwa ichi kunobvumira kuyerera kwakawanda kwemvura.
Imba yekupinda inoshandisa rakatenderedzwa kumucheto izere-muviri girazi uye rakakombama kabhineti, uye yakakosha yakakombama kona inoparadzanisa nzvimbo yeguruva kubva pakati pechitsuwa kuti igadzire magumo ekuona kwezuva richipenya pasi.
Musuwo une gomba rakakomberedza unopinda munzvimbo yega, uko kune zvese studio yekutandarira uye nzvimbo yekuzorora yemunhu wese.
Private Iyo yega nzvimbo yenzvimbo inoparadzirwa neye rima bhuruu yekurekodha kamuri.
Nguva yokutanga pandakaona bhaisikopo, ndakaona iyo bhaisikopo.
Nzvimbo dzebasa dzakarongedzwa zvakaenzana pamativi ese ecorridor. Chinhu chikuru chekamuri ndechekuti ine girazi rinotsvedza gonhi rinoipatsanura kubva kunzvimbo yekutora mifananidzo yemubati wechienzi, iyo inogadzirwa nematanda uye rattan. Makuru matumba emadziro uye akazara-akareba magirazi anotendera iye muenzi kuti apfeke zvisina zvipingamupinyi, uye maketeni akapetwa kaviri anotendera mwenje mukamuri kuti uchinje zvinoenderana nezvinodiwa nepfuti.
Kune rimwe divi repaseji pane murume muridzi studio yekurekodha, yakashongedzerwa neavebone, fenicha yemhando inoitirwa vaimbi. Kuvhenekerwa kunogadzira mamiriro ekugadzirwa kwega pakati pehusiku, uye zvinoita sekunge chidimbu chinofamba chemimhanzi chizozvarwa pano.
Mwanasikana mwana ane chishuwo chakasimba chekuita, saka mugadziri akashongedza nzvimbo yacho nepamusoro uye pazasi bunk uye nhanho diki iyo inowanzo kuve yakaenzana, iine chikamu chakaumbana chekuimba nekutamba, pamwe nechitarisiko chebhuku remifananidzo. uye yekuratidzira zvipfeko, nevabereki vachiva vateereri vakavimbika kwazvo, nepo vachigutsawo mhando yekamuri reroto rakarotwa naamai vari mwana.
Iyo diki archway kuburikidza yepamusoro bunk inzvimbo yakasarudzika yekicheni yevana, kwavanogona kutamba mitambo uye kutamba neyakafanana neyevana kufarira.
Iyo tenzi yekurara ine pasi pane mubhedha, kubvisa kudiwa kwechigaro-kumagumo chigaro uye pasofa, uye kuisa khushi kana kapeti inzvimbo yekuzorora.
Pakapfuura :: Plaster Lines, Iyo Inofanirwa kunge Yakagadzirwa Saizvozvi! Zvadaro: Elegance yeItaly Uye Yemhando yepamusoro Kuvaka Hupenyu hweRudo | HIDZA Helbena Dhizaini